हनिमुनमा गएका मनिषा र सम्राटको नेपाल निम्तो
Saturday, 31 July 2010 09:07	नागरिक
विश्वास हमाल, फिनल्यान्ड - फिनल्यान्डको उत्तरी भागमा हनिमुन मनाएर राजधानी हेलसिन्की फर्किँदा बलिउड नायिका मनिषा कोइरालामा नेपालीपन प्रष्टै देखियो। हनिमुनका लागि फिनल्यान्ड पुगेका मनिषा कोइराला र साम्राट दाहाल नेपालको पर्यटन वर्ष २०११ सफल पार्ने कार्यक्रममा समेत जुटे।
मनिषा र व्यवसायी दाहालले एक महिना अघिमात्रै नेपाली परम्परा अनुसार बिहे गरेका थिए। गैर-आवसिय संघ (एनआरएन) फिनल्यान्डले आयोजना गरेको नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को प्रवर्दन कार्यक्रममा बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको नेपलीपना झल्किएको थियो। मनिषाले मिडियाको सामु आफु नेपाली भएकोमा गर्वित गर्दै सबैलाई नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को उपलक्ष्यमा सुन्दर देश भ्रमण गर्न निम्ता गरिन्।
मनिषाले नेपाली खाना इच्छा भएको भन्दै 'गुन्द्रुक र तामा पाइन्छ कि?' भन्दा सबैलाई अचम्म्मित भएका थिए।
कार्यक्रमपछि एक फिनिशले रेशम फिरीरी गीत सुरु गरेपछि मनिषाले साथ दिइन्। कार्यक्रममा, फिनल्यान्डको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने दैनिक 'हेलसिन्की सानोमात' राष्ट्रिय न्युज एजेन्सी 'एस टि टि' ' वाइ एल इ टीभी' लगायत अरु मिडिया पनि थिए।
मनिषाको हनिमुनलाई फिन्ल्यान्ड्का मिडियाहरुले राम्रैसँग कभरेज गरेको बेलामा, एनआरएन ले उनलाइ भेट्घाट र चियापानमा मात्र सिमित नगर्ने गरि उनको माध्यमद्वारा नेपालको पर्यटन विकासको लागि फिनिस मिडियामा छाउने प्रयास गरेको थियो।
धेरै राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद मनिषा र साम्राट।
नेपालको माया लाग्ने भए हनिमुन मनाउन फिनल्यान्ड जानु पर्‍यो?
राम्रै भएछ। नेपाल टुरिजम वोर्ड टुहुरो भएको बेलामा यो कदमको स्वागत गर्नुपर्छ। पर्यटन वर्ष २०११ जिन्दावाद।
एक पन्थ दुई काज।
सबैको भलो होस्!
नेपालका मिडियाले केही समाचार नपाएको जस्तो छ।
kanhi nabhako jattra hadi gauma.jabo auta haliudko naekale bibaha gardaima yati dherai halla machaunu parchha ta?
गुन्द्रुक र तामा पाइन्छ कि?
भारतमा सशस्त्र समूहद्वारा मारिएका तीन नेपाली नागरिक रहेको खुलासा
छात्रवृतिमा पढ्न गएकालाई स्वागत
नेपाली पत्रकारलाई पहिलोपल्ट अमेरिकी मान्यता
एनआरएन दिवस असोज २५ गते पोखरामा मनाइने
अष्ट्रेलियामा नेपाल महोत्सव
नेपाली विद्यार्थीले अमेरिकामा पाए अन्तराष्ट्रिय अवार्ड
नयाँ आप्रवासी नीतिले रुवायो हजारौं विद्यार्थीलाई
चार स्वर्ण जितेका दीपकलाई २५ सय डलरसहित सम्मान
अमेरिकामा दुर्घटना गराएर भागेका नेपालीलाई के कारबाही होला?
क्यानडामा आप्रवासीलाई २९ क्षेत्र खुल्ला
हङकङको राजनीतिमा नेपाली